Wasiirka Gaashaandhiga oo soo dhaweeyay hadalki Xoghayaha guud ee Q.M. Ban ki Moon – idalenews.com
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweysay hadalkii uu dhowaan Xoghayaha Guud ee Q.M. Ban ki Moon uu ku shaaciyay inuu ka qeybqaadanayo sidii Soomaaliya looga qaadi lahaa cuna qabateynta xaga hubka ah ee saaran, ayadoo arintaasina ay Xukuumaddu ku tilmaantay mid gacan ka geysan doonta dib u dhiska Ciidammada Qalabka Sida ee Soomaaliyeed.
Wasiirka Gaashaandhiga mudane C/xakiin Xaaji Fiqi oo wareysi siiyay Radio Muqdisho ayaa hadalka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Banki Moon ku tilmaamay mid dhiirigelinaya qorshaha ay dowladu ku horumarineyso dhismaha ciidamada.
Sidoo kale wasiirka ayaa tilmaamay in cunaqabetnta la saaray Soomaaliya sanadkii 1992di xiligaas oo uu sheegay in ay jirtay duruufo ka dhashay burburka dowladii dhexe ee Soomaaliya, isagoo hoosta ka xiriiqay in maanta la gaaray markii la qaadi lahaa cunaqbateynta.
‘’Hadii la qaado cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya saarnaa mudada dheer waxey dowlada fursad u siineysa in ay dib u dhisto ciidamada qalabka sida oo noqondoona ciidamo tiro iyo tayaba leh, sidoo kale cunaqabateynta oo la qaado waxey dowlada fursad u siineysa in ay ku guuleysato la dagaalanka argagixisada caalamiga ah ee Alqaacida’’ ayuu yiri Wasiirka Gaashaandhiga mudane C/xakiin Xaaji Fiqi.
Hadalka wasiirka ayaa imaanaya xilli Qaramada Midoobay ay qorsheyneyso sidi loo qaadi lahaa cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya iyadoo garwaaqsan isbedelada iyo horumarka ay dowladu ka waddo dalka.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaaraha Britain oo gelinka dambe maanta kulmaya